Amaxabiso okutshintshiselwa kwemali yeDijethi ahlaziywa 21/09/2020
Imali engezantsi yedijithali ngo-2020. Uludwe lwemali engancinci yemali yedijithali namhlanje. Yiyiphi imali engancinci yedijithali?
Ixabiso elincinci elingu-10 elincinci lwedatha yedijithali ngokwexabiso lentengo enye yemali yedijithali kwiidola zase-US (USD) okwangoku.
Iimali zedijithali ezincinci kunayo 21/09/2020
bXIOT (BXIOT) 0 $
Rebase (REBASE) 0 $
Fidelity Token (FDT) 0 $
ESAX Token (ESAX) 0 $
Loanburst (Lburst) 0 $
iLINK (ILINK) 0 $
VirgoX Token (VXT) 0 $
SHIBA INU (SHIB) 0.00000000017 $
Bitcoinus (BITCOINUS) 0.000000010 $
Provoco Token (VOCO) 0.000000010 $
Eyona nto ibiza ixabiso eliphantsi yi-imali yedatha yinkonzo ye-intanethi ye-cryptoratesxe.com iwebhusayithi ebonisa ii-imali yedatha eziphezulu ngexabiso eliphantsi lendleko enye ethengiswa kwiitransport ze-crypto.
Inkonzo ye-intanethi "ye-imali yedatha ebiza kakhulu" isebenzisa imithombo evulekile evela kutshintshiselwano nge-imali yedatha kwaye iqokelela umyinge weyona crypto ingabizi kakhulu ngexesha langempela.
I-imali yedatha yexabiso eliphantsi okanye ebizayo ithathwa njengeendleko zengqekembe enye. Kuyimfuneko ukwahlula ixabiso leengqekembe zemali kwikapitali yemali, i.e. inani elipheleleyo lazo zonke ii-imali yedatha ezikhutshwe yile mali.
Ngokungafaniyo "Imali engabizi kakhulu yedijithali" inkonzo, ebonisa ixabiso leengqekembe enye, iindleko zizonke okanye ukukhutshwa kwazo zonke iingqekembe zemali kuboniswe ngenye inkonzo yendawo, Ikhamera ye-imali yedatha yemakethe .
Mhlawumbi i-imali yedatha yexabiso eliphantsi ngexabiso leengqekembe inokuba likhulu ngokwezimali.
Uluhlu lwezinto ezingabizi kakhulu kwi-imali yedatha zihlala zitshintsha, kuba ukurhweba nge-crypto kuyaqhubeka kwaye izinga lokutshintshiselana nge-imali yedatha liyanda okanye liyancipha.
Sebenzisa inkonzo "yexabiso eliphantsi kakhulu" kwi-Intanethi kunye nesimahla.
Ngaphezulu kweyona mali inexabiso eliphantsi 21/09/2020 imelwe kukukhethwa kwee-10 ze-cryptos ngolungelelwano lokuhlela ukusuka kweyona nto inexabiso eliphantsi ukuya kweyona ibiza kakhulu, ngolandelelo lwendleko.
Ixabiso eliphantsi okanye iindleko eziphezulu ze-crypto ziboniswa kwiidola lula ukuthelekisa.
Umgangatho wee-imali yedatha ezingabizi kakhulu zinikezelwa $date, kodwa izinga lihlala libekwe esweni.
Ewe kunjalo, ngomso okuphezulu kwexabiso elincinci lee-cryptocurrensets ngomso ziya kuhanjiswa.
Ndwendwela iwebhusayithi yethu kwaye usebenzise inkonzo yeyona nto ibiza ixabiso eliphantsi kakhulu namhlanje.
Imali engabizi kakhulu yedijithali 2020
Eyona nto ibiza kakhulu kwi-imali yedatha ye- 2020 yinkonzo yethu yasimahla kwi-Intanethi ebonisa ii-imali yedatha ezingabizi kakhulu kwi-2020.
Isampula ye-crypto engabizi kakhulu ingena 2020, kodwa sivavanya iinyanga ezi-3 zokugqibela zexabiso lotshintshiselwano. Ixabiso kunye namandla asezantsi ereyithi atshintsha mihla le kwaye ngenxa yoko amaxabiso ethu aphezulu "Ikhamera ye-imali yedatha yemakethe 2020" inokutshintsha yonke imihla.
I-Imali yedatha inexabiso elincinci.
Ixabiso eliphantsi lee-imali yedatha - ixabiso lethu le-imali yedatha yexabiso. Ingqekembe yeyona nto iqhelekileyo ukubala. Kucacile ukuba kunokwenzeka ukubala zombini ulwahlulo lweengqekembe kunye naliphi na inani leengqekembe kude kufike ixabiso elifunayo.
Ke, ukulinganisa kwe-imali yedatha ngexabiso elincinci kunemeko ethile.
Ukongeza kwixabiso le-imali yedatha, kufanelekile ukuqwalasela inani leengqekembe kunye nomcimbi opheleleyo weengqekembe kunye nexabiso, i.e. imali yedatha capitalization.
Ixabiso le-crypto liqikelelwa ngokunxulumene nedola yaseMelika. Oku kukuvumela ukuba uthelekise ii-cryptos ezahlukeneyo ngexabiso eliphakamileyo leengqekembe.
Uluhlu lwee-imali yedatha ezingabizi.
Uluhlu lwee-imali yedatha ezingabizi kakhulu - ezibonakalayo ezibonakalisa ulwazelelo lwethu oluphezulu lweyona crypto ingabizi kakhulu.
Kwitheyibhile ye-crypto enexabiso eliphantsi ungabona igama le-imali yedatha kunye nereyithi yokutshintshiselana kwabo kwiidola zaseMelika.
Xa ucofa enye yeyona nto ibiza imali engabizi kakhulu kwiitheyibhile, uyakuya kwiphepha lolwazi elineenkcukacha ngomyinge wale crypto.
Itshati yee-imali yedatha ezingabizi kakhulu.
Itshati ebiza imali encinci ye-imali yedatha sesinye isixhobo simahla kwi-Intanethi esibonisa umgangatho ophezulu wezinto ezingenaxabiso eliphantsi.
Itshathi yeyona nto ibiza ixabiso eliphantsi ye-imali yedatha ibonisa amaxabiso aphezulu ee-10 zeengqekembe ezixabiso eliphantsi.